#GIS - Koorsada Geolocation for Android - adoo adeegsanaya html5 iyo Khariidadaha Google - Geofumadas
#GIS - Koorsada Geolocation for Android - adoo adeegsanaya html5 iyo Khariidadaha Google
Koorsadan waxaad ku ogaan doontaa sida loo sameeyo codsi mobiil leh Khariidadaha Google iyo taleefanka
Ku habboon bilowgayaasha. Ma dooneysaa inaad barato sida loo horumariyo arjiga mobilada oo loogu daro khariidadaha khariidadaha Google ee APIs?
Khariidadaha Google waa adeeg khariidad khariidad shabakadeed oo leh Alphabet Inc. Adeeggan wuxuu bixiyaa sawirro khariidado la sawiray, iyo sidoo kale sawirrada dayax gacmeedyada adduunka, iyo xitaa khadka u dhexeeya gooba kala duwan ama sawirro heer waddo leh Muuqaalka Google Street .
Khariidadaha Google waa mid ka mid ah API-yada ugu adeegsiga badan adduunka, waxay lahayd isbeddel ay ku bilowdo ku dallacsiinta adeegyadeeda.
Laakiin ha ka walwalin biilka maxaa yeelay codsiyada mobilada waa bilaash.
Maxaan u qaadanayaa koorsadan?
Waad abuuri kartaa codsi mobiil ah
Waxay taageertaa nidaamyada macmiilka, macruufka, Android, Windows Phone.
Waxaan hayaa su'aalo badan.
Weydii su'aalaha fiidiyaha. Jawaabna ha ku hesho waqtiga ugu gaaban ee suurogalka ah
Cusbooneysiinta waxyaabaha si joogto ah.
Ku abuur arjiga taleefankaaga
Kudar khariidadda arjiga
Qari oo tusi kontaroolada khariidadaha
Kudar calaamadaha qariirada
Isugu dhig gaar ahaan Bookmarks
Ka raadso meelaha ku yaal khariidada
Ku dulbar khariidadda adigoo adeegsanaya GPS-ka mobilada
Kudar khariidadaha moobiilka
Heerka html aasaasiga ah
barnaamijka aasaasiga ah
Isticmaalayaasha 'Joomatics' kuwaas oo doonaya inay horumariyaan xogtooda
Soosaarayaasha dalabka moobiilka
Waxyaabaha ay u qalmaan abuurista codsigooda ugu horreeya
Ardayda wax barata
Post Previous«Previous #BIM - Nidaamyada biyaha isticmaalaya Revit MEP
Post Next #GIS - Koorsada ArcGIS 10 - oo ah xoqNext »